Warshadeenu waxay jirtay 10 sano, marwalbana waxaan iskudayeynaa sida ugufiican ee aan ubixino alaabada ufiican macaamilkeena, waxaan iska hubinaa gabal walba intaanan dirin, waxaan rajeyneynaa in gabal kasta oo gacanta macaamiisheena kujira uu fiicanyahay una qalmo. Laakiin waan ognahay in kaliya ay leeyihiin alaab duug ah kuma filna, si loo siiyo xulashooyin badan oo macaamiisha ah inay doortaan.Sanadkan waxaan soo saarnay seddex shey, sheyadaani waxay leeyihiin muuqaal muuqaal casri ah amd xoog leh. Laba qaybood oo balastar hawadeed ah iyo hal xabbo oo faakiyuum ah, aan eegno.
CY102-16, sheygan waa isku-duubaya hawo laba-dhululubo ah, dhamaan qeybaha birta ee leh awood xoog leh waxay u egtahay maqal, oo leh muuqaalka LED-ka, way fududahay in la shaqeeyo, oo si otomaatig ah ayey u joogsataa, waxay siineysaa macaamilka dareen wanaagsan oo adeegsi ah. u samee midabyo kala duwan macaamiisha, badeecaddu waxay noqon doontaa mid aad u qurux badan.
Sheygan hadda wuu dhammaaday naqshadeynta, waxaan sameyn doonnaa naqshad morden ah iyo jir yar oo ka mid ah, sidaas darteed way fududaan doontaa in la qaado, haddii macaamilku rabo, waxaan ku dhejin karnaa batteriga gudaha, waxaa dib ugu buuxin kara USB fiilo kasta. maxaa yeelay waa la isticmaali karaa bilaa silig, way ku haboon tahay waxayna waqti badan u badbaadin kartaa dadka googo'yada ah. in kastoo ay yar tahay, waxay sidoo kale waqti yar ku kicin kartaa taayir. Ha ka welwelin qiimaha, weli waa soo jiidasho.
VC-113 waa nadiifiyaha faakiyuumka cusub, waxay ku jirtaa jir yar, iyo awood nuugid ballaaran, waxay umuuqataa koob, waxaad dhigi kartaa meel kasta oo aad rabto, kursiga gaariga ama fadhiga guriga, marna ma oggolaan doono hoos ayaad u dhacday muuqaalkaaga wanaagsan awgeed.waa mid aad u fudud in laga saaro boodhka iyo granule, xitaa kafeega oo si taxadar la'aan ah ku daatay. Waxaan u samayn karnaa midabbo badan oo kala duwan macaamilka, oo ku daabac calaamadda jirka badeecadaha.
Sannadka cusub, waxaan iskaashi la yeelan lahayn macaamiil badan oo aan saaxiibo badan ka heli lahayn adduunka, waxaan aaminsanahay inay noqon doonto sannad la yaab leh!